को’रोना संक्र’मित पूर्वरानी कोमलको स्वा’स्थ्य अवस्था गम्भि’र – Sadhaiko Khabar
को’रोना संक्र’मित पूर्वरानी कोमलको स्वा’स्थ्य अवस्था गम्भि’र
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, बैशाख १७, २०७८ समय: २०:०६:२७
काठमाडौं/ को’रोना भाइ’रसबाट संक्र’मित पूर्वरानी कोमल शाहको स्वा’स्थ्य अ’वस्था जटि’ल बन्दै गइरहेको छ । को’रोना भाइ’रस संक्र’मण भएर उपचा’ररत पूर्वरानी कोमल राज्यलक्ष्मी शाहलाई प्ला’ज्मा दिएर उप’चार भइरहेको छ ।
थापाथलीस्थित नर्भि’क अस्प’तालमा उप’चाररत शाहको स्वा’स्थ्यमा सम’स्या थपिँ’दै गएपछि उनलाई अक्सि’जनको मात्रा बढाइनुका साथै प्ला’ज्मा दिइएको छ ।
स्वा’स्थ्यमा सुधार नभएपछि बुधबार बेलुका उनलाई आई’सियूमा सारिएको थियो । उप’चारमा संलग्न डा. जेपी जयसवालले भने, ‘हाल १० लिटर अक्सि’जन प्रतिमिनेट दिनुपरेको छ, उहाँको अव’स्था स्थिर छ । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको भने स्वा’स्थ्य अव’स्था सामान्य छ ।’
निजामती कर्मचारी अस्प’तालका निर्देशक प्राडा. विधाननिधि पौडेलका अनुसार सामा’न्यतया अक्सि’जनको लेभल कम भएका बिरामीलाई एक मिनेटमा ५ लिटरसम्म अक्सि’जन दिनुपर्छ । तर, अवस्था गम्भि’र हुँदै गएमा बढा’उँदै लैजानुपर्छ ।
एक मिनेटमा १० लिटर अक्सि’जन दिनु जोखि’मपूर्ण अव’स्था हो । जति अक्सि’जनको मात्रा बढ्दै जान्छ, त्यति नै बिरा’मीको अवस्था ज’टिल बन्दै जान्छ । उ’च्च जटि’ल र सामान्य अवस्थाको बीचको अवस्थामा सो मात्रामा अक्सि’जन दिनुपर्ने हुन्छ ।
पूर्व अधिराजकुमारी प्रेरणा शाहको स्वा’स्थ्य अवस्था भने सन्तोषजनक रहेको अस्प’तालले जनाएको छ । को’रोना संक्रमण पु’ष्टि भएपछि केही दिन होम आइसो’लेसनमा बसेका पूर्वराजा, पूर्वरानी र पूर्वअधिराजकुमारी वैशाख १ गते नर्भि’कमा भर्ना भएका थिए ।